Ciidamo gadoodsan oo saakay la wareegay xaruntii ay ka socotay doorashada Aqalka hoose ee Kismaayo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamo gadoodsan oo saakay la wareegay xaruntii ay ka socotay doorashada Aqalka hoose ee Kismaayo
Wararka naga soo gaarayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in ciidamo gadoodsan ay saakay qabsadeen xaruntii doorashada xildhibaanada Jubbaland u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ciidamadaan gadoodsan ayaa la sheegayaa inay ka tirsan yihiin kuwa maamulka Jubbaland, waxayna ka cabanayaan mushaar la’aan dhowr bilood oo aan la siinin.
Wasiiro iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo wada-hadal la galay ciidankaasi gadoodsan ayaa markii dambe ku qanciyay inay ka tagaan xarunta doorashada, iyadoo balan-qaad loo sameeyay in la siin doono mushaarka ka maqan.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka ayaa guud ahaantooda wax mushaar ah la siinin muddo bilooyin ah, taasoo ay ugu wacan tahay in dhaqaalihii loogu talogalay ciidankaasi lagu galay doorashada.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeyay ee ciidamo gadoodsan ay ku galaan xarumaha doorashada 2016 ee ka dhacaya shan ka mid ah xarumaha maamulada goboleedyada iyo caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoona magaladda Kismaayo ay weli ka soconayaan doorashooyinka xubnaha Aqalka hoose, taas oo qeyb ka ah doorashooyinka la filaayo inay dhawaan dalka ka dhacaan.